All Ebooks :: Malagasy :: Ny Fahaiza-Manaraka
HomeAll EbooksMalagasyNy Fahaiza-Manaraka
Dia fahafantarana mampavitribitrika ny fanarahana an’ Andriamanitra. Fahaiza-mianatra taloha nosafidin’ I Jesosy Kristy ho fitsipika nentiny nampiofanana ny fanarahana sy ny fandikana ny hafa. Fotoana hatakarana ny fahatsarana sy ny fanetren-tena amin’ ny fahaiza-manaraka izao fa tsy fialana...
Dia fahafantarana mampavitribitrika ny fanarahana an’ Andriamanitra. Fahaiza-mianatra taloha nosafidin’ I Jesosy Kristy ho fitsipika nentiny nampiofanana ny fanarahana sy ny fandikana ny hafa. Fotoana hatakarana ny fahatsarana sy ny fanetren-tena amin’ ny fahaiza-manaraka izao fa tsy fialana lavitra izao fotoanan’ ny fomba fampiofanana.
Ho hitanao ato amin’ ity boky ity hoe iza, inona ary ahoana ny manaraka tsara. Manome toerana tokony hisy ny fahaiza- manaraka eo amin’ ny traikefantsika Kristiana ity boky feno faranitan-tsaina nosoratan’ i Dag Hewar-Mills ity.